Home » Critic » Save the Shwedagon!
ရွှေတိဂုံဘုရားနားမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းဘေးက စစ်တပ်ကွာတာဟောင်းတွေဖြိုပြီး
ကွန်ဒိုစီမံကိန်းကြီး တခုစတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ တပ်ပိုင်တာတွေ ဦးပိုင်တာတွေ
အဘပိုင်တာတွေ ဘာတွေညာတွေ တခုမှ ကျနော်မပြောလိုပါ ။ ကျနော်ပြောချင်တာ
ကတော့ (အများပြောနေကြတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးထက်မြင့်သွားမယ်
ကွယ်သွားမယ် အေးချမ်းတဲ့အရသာပျက်သွားမယ် ဆိုတာတွေထက်) ဘူမိဗေဒ
အဲသည်လောက်ကြီးမားတဲ့ အထပ်မြင့် အိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း
အတွက် Foundation အတွက် မြေအောက် car park တွေအတွက် မြေကို
အတော်နက်နက် (အနည်းဆုံး မီတာ ၂ဝလောက်တော့) တူးဖော်ရပါမယ်။ ဒီအခါမှာ
ရွှေတိဂုံစေတေီတော်ကြီးရဲ့အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ မြေသားတွေရဲ့အမျိုးအစားပေါ်
မူတည်လို့ အကယ်၍ ရေအောင်းမြေလွှာ Acquifier layer ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်
ထိုမြေလွှာထဲတည်ရှိနေတဲ့ မြေအောက်ရေဟာ မြေအောက် နိမ့်ရာ မျက်နှာပြင်
အပွင့်ရှိရာ ကွန်ဒိုစီမံကိန်းအတွက်တူးထားတဲ့ တွင်းကြီး ဘက်ကိုစီးဆင်းထွက်
လာပါလိမ့်မယ်။ ground water seepage လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူ့အမြင်မှာ
အဝေးကြီးပါလို့ထင်ရပေမဲ့ မြေအောက်ဘူမိနေထားတွေဟာ မိုင်ပေါင်းများစွာ
ဝေးနေလည်းဆက်စပ်နေတာပါ။ ဒီအခါမှာမြေလွှာဟာ ရေတွေထွက်သွားတဲ့
အတွက်ပိုမို သိပ်သည်းလာပြီး ထုထည်နည်းလာကာ စေတီတော်ကြီးထိုင်နေတဲ့
မြေမျက်နှာပြင်မှာ နိမ့်ကျလာနိုင်ပါတယ်။ settlement လို့ခေါ်ပါတယ်။
နေ့ချင်းညချင်းမဖြစ်ပဲ လနဲ့နှစ်နဲ့ချီ လာမှသိသာလာမှာပါ။ စေတိတော်ကြီး
တည်ထားတာ ဘာ pile / deep foundation မှရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
တောင်ပေါ်မှာ အုတ်စီထားယုံပါ။ ကန်တော်မင်ပန်းခြံက ရေကန်ဟာလည်း သူ့ဟာသူနေနေရင်သူ့ဟာသူနေနေရင်ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အနားမှာ
deep excavation ကြီး ရှိလာတဲ့အခါ မြေအောက်ရေ ရွေ့လျောဖို့ အကြောင်းတခုဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့ အဲဒီကွန်ဒိုတွေအတွက် ဘယ်ကရေကိုပေးမှာလဲ။ အဲဒီမှာပဲ အဝီစိတွင်းတူးရင်တော့ အင်း……
တဖြေးဖြေးနဲ့ …. ။
အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် မပြောကောင်းမဆိုကောင်းစေတီတော်ကြီး တိမ်းစောင်း
လာတာတို့ ကွဲအက်တာတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရင်ပြင်တော် တဘက်စောင်း
ကျတာ ကွဲအက်တာတွေ စေတီရံတွေ ဆောင်းတန်းတွေ အကုန် သက်ရောက်
လာနိုင်ပါတယ်။ အနားက မဟာ ဝိဇယစေတီတော်လည်းထည့်စဉ်းစားရ မှာပါ။
ဖြစ်လာမှ ပြုပြင်လို့မရတော့ပါ။ အခု ဘာမှမဖြစ်တာက အနီးအနားမှာ
အဲသည်လို deep excavation / deep foundation နဲ့ဆောက်တဲ့ အဆောက်ဦး ရှိမှမရှိခဲ့သေးတာ။ ကမ္ဘာကျော် အမွေအနှစ်ကြီးတခုခုဖြစ်ရင် ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလှပါမယ်။ ဒဏ္ဍာရီပြောပြော ဘာပြောပြော ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနဲ့ ပင်လယ်ဝနဲ့ ဆက်နေတဲ့ မြေအောက်ရေကြောလိုလို လှိုဏ်ခေါင်းလိုလို မြေအောက်မှာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့
အချက်ကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားလို့တော့မဖြစ်ပါ ။ ( ကျနော်ပြောနေ
သမျှတွေဟာ အကယ်၍ စေတီအောက်မှာ acquifier layer လုံးဝ မရှိပဲ
ရေမအောင်းတဲ့ ကျောက်သားချည်းဆိုရင်တော့ ပူစရာမရှိပါဘူး။ )
ဒါကိုထဲ့တွက်ပြီး ထိုဒေသတခုလုံးရဲ့ မြေအောက်မြေသားကျောက်သား
အနေအထား soil investigation တွေကို ဧရိယာအကျယ်ကြီး ငုံမိအောင်
သေသေချာချာလေ့လာပြီး Foundation design မှာလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်
တဲ့အစီအစဉ်တွေ အသေအချာ တွက်ချက်စီမံထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
နောင်အရှည် အဲဒီကွန်ဒိုအိမ်ယာကြီးကို ဘယ်လိုရေပေးမှာလဲကအစပေါ့။
ဆောက်လုပ် ခွင့်ရမဲ့ကုမ္ပဏီဟာလည်း အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပိုင်လို့ရသွားတဲ့
သူမျိုးမဟုတ်ပဲ Technical , Quality နဲ့ Safety ကိုဦးစားပေး တဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချ
ရတဲ့ နာမည်ကောင်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလှပါတယ် ။
ဥပမာ deep excavation wall မှာ ပတ်လည် ထူထည်းတဲ့ စိတ်ချရသည်
အထိနက်တဲ့ Diaphragm wall / Sheet pile တွေနဲ့ကာရံတာမျိုးပါ။
ကျွမ်းကျင်တတ်သိတဲ့Geologists တွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ
များစွာရှိပါ တယ်။ထိုသူတွေကိုနေရာပေးဖို့နဲ့ ဆောက်မည့်သူတွေ ပေါ့ပေါ့ သဘောထားကြမှာကိုပဲ ပူပင်မိတာပါ။ ဒါတွေက စေတီတော်ကြီးအတွက်သာ
မကပါဘူး။ ဆောက်လုပ်မဲ့ ကွန်ဒိုတွေနဲ့ ဝင်းကြီးတခုလုံးအတွက် technically
ရေရှည် စိတ်ချရအောင် အရေးတကြီး ထည့်သွင်းစဉ်းဖို့ပါ။
deep excavation မတူးဘူး။ multi storeyed car park ကိုလည်း မြေပေါ်မှာပဲ အဆင့်ဆင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်သေးမှာပါ။ ဒါတောင် အုတ်မြစ်အတွက်
deep piles တွေ တူးရဦးမှာပါပဲ။ ဆောက်မဲ့နေရာက စေတီတော်ကြီးနဲ့
အရမ်းဝေးပါတယ် အပူလွန်နေတယ်လို့ပြောရင်လည်း မပြောလိုတော့ပါ
ဘူး။ ကျနော် ကန့်ကွက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါ။ တွေးသင့်လုပ်သင့် တယ်ထင် တာလေးကိုပြောပြကြည့်တာပါခင်ဗျ ။ ကျနော် ပူပင်စိုးရိမ်တဲ့အနေအထားကို ပုံကြမ်းလေးဆွဲပြထားပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီကကူးပါတယ်..။
ဒီနေ့ Ko Min Aung Khaing ရဲ့ “အရေးတကြီး စဉ်းစားကြဖို့ပါ” ဆိုတဲ့ ရွှေတိဂုံ အောက်က မြေအောက်ရေ ထွက်သွားရင် settlement ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပုံကို တော်တော်များများ share ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ကျနော်တို့ ပြောနေတဲ့ Save our Shwedagon ပေါ့လေ …
မြေပေါ် အနိမ့်အမြင့် ကတော့ architecture ပိုင်း နဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်။ မြေအောက်နဲ့ structure ပိုင်းကတော့ ကျနော်တို့ engineer တွေ၊ geologist တွေနဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်။
မြေအောက်ရေ နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အရမ်းကြီး စိုးရိမ်ရတယ် လို့ မဆိုနိုင်သလို ၊ လုံးဝ မစိုးရိမ် ရဘူး လို့လဲ မပြောနိုင် ပါဘူး … အတိုင်းအတာ တခုအထိ risk ရှိပါတယ်။ risk တွေကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ရွှေတိဂုံ နားက ပရောဂျက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြေအောက်ရေ အကြောင်း မပြောခင် basement တူးပြီးဆောက်တဲ့ ပရောဂျက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွက် basement ပိုင်းကို အရင် ပြောချင်ပါတယ်။
လန်ဒန် မှာလဲ အပေါ်တက်တာတွေ ကန့်သတ်တော့ သူဌေးတွေ လိုချင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရေကူးကန်၊ ကိုယ်ပိုင် ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင် အားကစားခန်း၊ ချွေးထုတ်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် တခုစာလောက်ကြီးတဲ့ kitchen တွေ နေရာချဖို့ စတာတွေ အတွက် မြေအောက်ထဲမှာ basement ၂ ထပ် ၃ထပ် ဆောက်ရတယ်။
လောလောလတ်လတ် ကျနော် အစအဆုံး တာဝန်ယူ လုပ်နေတဲ့ ပရောဂျက်တွေ ထဲမှာ မြေအောက် ပေ ၃ဝ – 10m deep basement ပါတဲ့ ပေါင် သန်း ၂ဝ ကျော် တန် ပရောဂျက် တခုလဲ ပါ ပါတယ်… လန်ဒန် မြို့လည်ခေါင်မှာပါ … ကျနော်တို့ client ဘီလျံနာ သူဌေး ရဲ့ ရပ်ကွက်မှာ ဆောက်တဲ့ ကျနော့် ပရောဂျက် ဘေးအိမ်ကလဲ သန်းချီ တန်ပါတယ်။
(ဘေးမှာ အကွဲကြောင်း တခုုခု ပေါ်လာပြီဆို ဘယ်လောက် ပြသနာ တက်လိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်လို့ ရပါတယ်)
Deep basement ဆောက်ရင် အကြောက်ရဆုံးကတော့ ဆောက်လုပ်ဆဲ အချိန် ဘေးက မြေ လိုက်လာမှာ (ground movement) ကို တော်တော် စိုးရိမ်ရပါတယ်။
မြေအောက်ထဲ အဆောက်အဦး ထိုးထည့်ဖို့ မြေတူးလိုက်တာနဲ့ လွတ်သွားတဲ့ နေရာကြောင့် ဘေးတိုက်ရော အပေါ်အောက်ရော load relief ဖြစ်ပြီး ဘေးမြေ က လိုက်ရွေ့ လာတတ်ပါတယ်။
Ground movement ဟာ construction method နဲ့ မြေသား ပေါ်မှာ အတော်ကြီးကို မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရွေ့သွား နိုင်တယ် ဆိုတာကို အတိအကျ ခန့်မှန်းဖို့ကလဲ တော်တော်ကြီး ကို ခက်ပါတယ်။
အဆောက်အဦးတွေ သိပ်ကပ်နေတယ် ဆိုရင် ဘေးအဆောက်အဦး ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ground movement ကို အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မြေမတူးခင် ဘေးမြေကို လှုပ်မလာအောင် pile wall တွေ ရိုက်သွင်းကြတယ်။ contiguous pile wall, secant pile wall, sheet pile အစရှိသဖြင့် project location နဲ့ တူးမဲ့ အနက်ပေါ် မူတည်ပြီး မျိုးစုံ သုံးတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ pile wall တွေကို ဘေးမြေ တွန်းတာ ခံနိုင်အောင် design လုပ်တဲ့ အခါမှာလဲ pure cantilever လုပ်မလား၊ propped cantilever လုပ်မလား ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီးတော့လဲ ဘေးမြေရဲ့ အရွေ့ဟာ မတူပါဘူး။
နောက်တခါ temporary retaining structure ဘယ်လောက် rigid ဖြစ်လဲ ဆိုတာပေါ်မှာ လဲ ဘေးမြေ အရွေ့ဟာ မူတည်ပါတယ်။
ဆောက်တဲ့ အခါလဲ open excavation (မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်များတဲ့ slope နဲ့ ဒယ်ပိုင်းလို တူးထုတ်တာမျိုး) ၊ bottom-up/ top-down/ semi top-down စတဲ့ ဘယ် method ကိုဘဲ သုံးသုံး၊ temporary works က ဘယ်လိုဘဲ rigid ဖြစ်ဖြစ် ဘေးက မြေက အနည်းနဲ့ အများတော့ ရွေ့ပါတယ်။
လန်ဒန် ရဲ့ အထင်ကရ Grade I listed အဆောက်အဦး လဲ ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး အရ လဲ အရေးပါ၊ heritage building လဲ ဖြစ်တဲ့ Westminster parliament ထဲမှာ ခေတ် အခြေအနေ အရ လိုအပ်လာတဲ့ အတွက် မြေအောက် ပေ ၅ဝ – 15m deep basement car parking ဆောက်ရပါတယ်။
Thames မြစ်ဘေးလဲ ဖြစ်၊ UK မှာ သူ့ထက် အထင်ကရ ဖြစ်တဲ့ အဆောက်အဦး လဲ မရှိတော့တဲ့ အဆောက်အဦး ဘေးမှာ deep basement တူးတာ ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ ဂရုစိုက် လုပ်ခဲ့မလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။
Top down construction နဲ့ ဆောက်ပြီး retaining wall ကို diaphragm walls နဲ့ ကာထားပါတယ်။
ပြထားတဲ့ ပုံက ဘေးမြေ အရွေ့ကို monitor လုပ်ထားတဲ့ ပုံပါ။ အဲဒီလောက် အင်မတန် ဂရုစိုက်ပြီး တိတိကျကျ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်ပြီး လုပ်တာတောင် တူးတဲ့ အနက် ရဲ့ ၃ဆ ထိ အောက်ဖက်ရော၊ ဘေးတိုက်ရော မှာ movement ရှိနေပါတယ်။
ရွှေတိဂုံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင်တော့ ဒါမျိုး movement ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အကွာအဝေး တခုရယ်၊ မြေတူးမဲ့ အနက် ရယ် ကို သတ်မှတ်ပြီး construction method တွေကို review လုပ်မယ်၊ တိတိကျကျ လိုက်နာခိုင်းမယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
(YCDC ရဲ့ law enforcement က အားကိုးနိုင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့)
ဒီနေ့ ဖတ်မိတဲ့ မြေအောက်ရေ ထွက်သွားရင် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ ….
Deep basement ဆောက်တဲ့ သူ အနေနဲ့တော့ မြေအောက်ရေ ရဲ့ တွန်းအားတွေကို ခံနိုင်အောင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ လိုပေမဲ့ deep basement တူးပြီး အဆောက်အဦး ဆောက်ရုံနဲ့ မြေအောက်ရေ ထွက်သွားနိုင်တယ် လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဆောက်အဦးကြောင့် မြေအောက်ရေ ထွက်မသွားနိုင်ပေမဲ့ မြေအောက်ရေ ထွက်လို့ water table နိမ့်ကျသွားတာကြောင့် settlement ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။
မြေအောက်ရေ ဘယ်လို ထွက်နိုင်သလဲ ???
အဲဒီနေရာမှာ နေမဲ့ လူတွေ အများကြီး အတွက် အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်တယ်။ အဲဒီလူတွေ သောက်ဖို့ သုံးဖို့တော့ ဂျိုးဖြူရေ မပေးနိုင်ဘူး… အဲဒီနေရာမှာဘဲ အဝီစိ တွင်းတွေ သုံးပြီး တူးကြ ဆိုရင်တော့ မြေအောက်ရေ တွေ အပေါ်ကို ထွက် သွားပါလိမ့်မယ်။
အဝီစီတွင်း များများ သုံးပြီး မြေအောက်ရေ ထုတ်မယ်၊ ထုတ်သလောက် ရေကို surface water ကနေ ပြန်ပြီး ဖြည့်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ water table နိမ့်ဆင်း သွားပါလိမ့်မယ်။
Water table နိမ့်ဆင်းသွားရင်တော့ Ko Min Aung Khaing လိုဘဲ အများ စိုးရိမ်သလို consolidation settlement ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ခွင့်ပြု မလဲ …
ဘယ်လို ပုံစံ ဆောက်တာတွေ ခွင့်ပြု မလဲ …
ဘယ်လို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ မလဲ …
ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ …
ဘာတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ …
ဘယ်သူတွေမှာ အဓိက တာဝန် ရှိလဲ …
ရှိလာမဲ့ Risk တွေကို ဘယ်လို လျှော့ချနိုင်လဲ ..
လျှော့ချ နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အကောင်အထည် ဘယ်သူတွေ ဖော်နိုင်လဲ …
အကောင် အထည် မဖော်နိုင်အောင် ဘယ်သူတွေ ဟန့်တား နိုင်သလဲ …
ဆိုတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ နည်းနည်း စဉ်းစားကြည့်လို့ ရနိုင်ပြီ ထင်ပါတယ် …
Dagon City အပါအဝင် ရွှေတိဂုံစေတီ အနီးဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းငါးခု အနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် အချက်ခြောက်ချက်ပါ Master Plan ရေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်နေ
Dagon City စီမံကိန်း အပါအဝင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အအုံစီမံကိန်း ငါးခုအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် အချက်ခြောက်ချက် ပါဝင်သည့် Master Plan ကို စတင်ရေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ Marga Landmark Development ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်နေသော Dagon City စီမံကိန်း၊ Shwe Taung Development ကုမ္ပဏီ မှ စီမံကိန်းနှစ်ခု၊ Thu Kha Yandanar ကုမ္ပဏီ၊ Adventure Myanmar Tour and Incentives ကုမ္ပဏီတို့၏ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းငါးခုမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကဲ့သို့ အရေးကြီး အဆောက်အအုံများကို မည်ကဲ့သို့သက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) က ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပြုပြင်ခြင်း ၊ လှကြည်..။
Marga Landmark prepares to take legal action against individual or parties who spreading rumours about Dagon City One project
Save Irrawaddy …
Save our Shwedagon ..
Save Yangon ….
မြန်မာပြည်မှာ Save … Save … နဲ့ အော်နေကြတာတွေ ကြည့်ပြီး ….
IS အကြမ်းဖက် သမားတွေ ဓားစာခံတွေ တယောက်ပြီး တယောက် ထုတ်ပြီး သတ်ပြ နေတာ သွားမြင်မိတယ် …
ကောလာဟလလို့ပဲပြောပြော ဘာပဲပြောပြော …..
ခုလိုအင်တာနက်ခေတ် သတင်းခေတ်မို့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေသိရလို့ အရမ်းကာရောမလုပ်ရဲကြတာ ဝမ်းသာစရာပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က အင်းလေးရောက်ခဲ့တုန်းက အင်းလေးကို save လုပ်ဖို့အော်နေကြလေရဲ့။
ရွှေတိဂုံဆိုတာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Landmark မို့ ပိုအလေးထားဖို့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုတာပေ့ါ။
.လောလောဆယ် ရွှေတိဂုံတွေ ဧရာဝတီတွေကို seve နိုင်ဖို့
အရင်ဆုံး ကိုယ့် ကိုယ်ကို ကိုယ် ကယ်တင်နေရတယ်
မသေသင့်တဲ့ရောဂါလေးတွေနဲ့ ဖျတ်ခနဲ မသေအောင်
.သေသွားဖို့ အကြောင်းတွေ ဖန်နေတဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားရမှုဝန်းကျင်ထဲမှာ
ဖျတ်ခနဲ သေမသွားဖို့. . .
သွားသတိ လာသတိ စားသတိနဲ့ တတိတိ ကယ်တင်နေရလို့. . .
.ကြီးမားလှတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ နည်းပါးလှတဲ့ ဝင်ငွေကြားမှာ အာဟာရမလုံလောက်လို့ အားအင် ပြတ်လပ်မသွားအောင်လည်း
ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပြန် ကယ်ဆယ်နေရတယ်
.ရွှေတံဂုံ မပြောနဲ့ ကျိုက်ကလို့ဘုရားကိုတောင် မကယ်အားသေးဘူး။
save ourself ! အဲ့ဂလို ​ပြောချင်​တာလား အလက်​ဇင်​းဒါး ဂ
တား မ ရ ဆီး မနို င်
သက်ရောက်နိုင်မှုကို ဘူမိဗေဒအမြင် စေတနာဖြင့် ကျနော်ရေးတင်ခဲ့သော ပို့စ်ကို
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တိုက်ရိုက်မရှယ်ဘဲ ပိုပိုသာသာ မသင့်မတော်
ခေါင်းစဉ်တခုကိုပြောင်း။ စာသားများကို copy & paste လုပ်။ ကျနော်၏စာသား တချို့ကို
ဖယ်ရှားကာ The Irrawaddy (Burmese Version) FB page တွင် ပြန်တင်။ ကျနော်
ဖဘမှာ အော်ဟစ်သဖြင့် ဧရာဝတီက ပြန်ဖြုတ်ချလိုက်သော်လည်း (ကျနော့်
အားတောင်ပန်ခြင်းမရှိ) မဖြုတ်ချမီ ထိုပို့စ်ကို အခြားသူများက လည်း ကြိုက်
ရာခေါင်းစဉ်တပ်၊ ထပ်ဆင့်copy & Paste တွေလုပ်ပြီး တင်ကြရာကစပြီး ဖေ့ဘွတ်တွင်
အတော်ကိုပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ ကျနော်၏မူလခေါင်းစဉ်နှင့် စာသားအပြည့်လည်းမပါတော့ပါ။
ကျနော်သည် ဘာသာရေးအမြင် နိုင်ငံရေးအမြင် ရှေးဟောင်းသုတေသန
သဘာဝအလှထိန်းသိမ်းရေးအမြင်များတခုမှမပါပဲ ဘူမိဗေဒအမြင် တခုတည်းနှင့်ဖြစ်နိုင်
သည့်အန္ထရာယ်ကို ရိုးသားစွာရေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဤကိစ္စကို စိုးရိမ်မှု အနန္ထ
စေတနာဗလဗွဖြင့် နိဒါန်း နိဂုံးများ ပုံအသစ်များ ဖြည့်စွက်ကာ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ကြ
သူများကြောင့် ကျနော့်မူရင်းစေတနာမှာ တဖြေးဖြေး အထင်လွဲစရာဖြစ်လာ နိုင်ပါပြီ။
ခေတ်စကားဖြင့်ပြောရလျှင် ကျနော်က ဖွ သူဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ကျနော့်မှာ
ဆေးထိုးခံရသလိုလိုဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုစီမံကိန်းကြီး မှတာဝန်ရှိသူများ၊
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အခြားပညာရှင်များ၊ စာဖတ်သူများအားလုံး သည် တစုံတခု
ဘဝင်မကျ ဒွိဟဖြစ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ (ပုံ ၁-၂-၃ အထိ) ပါ ကျနော်၏ မူရင်းပို့စ်ကို
သာ ရည်ညွှန်းကြပါစေလိုကြောင်း ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ (ပြန်ရှာလိုလျှင် ၉-၅-၂၀၁၅
နေ့လည်ကတင်ပါသည်) ။ကျနော်သည် ဘူမိဗေဒလောကတွင် ယင်ကောင်လေး
တကောင်သာဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပမှာ ဘူမိဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်လုပ်ရင်း
အများအတွက် အကျိုးတခုခုရှိမည့်ထင်သည့်စာလေးများရေးရင်း၊ သီချင်းဆိုရင်း
မိသားစုနှင့်အတူနေရင်း ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာလျှောက်နေသူဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေး
သမားလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျနော်ရေးသော ပို့စ်တွင်မည်သည့်လူအမည် မည်သည့်
ကုမ္ပဏီအမည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးသဘောသုံးသပ်ချက်မှမပါဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသဘောမပါဘဲ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မြန်မာ ဘူမိဗေဒ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများက ဤကိစ္စကို အထူးစိုးရိမ်ကြကာ အခွင့်အာဏာရှိသူများထံ
တင်ပြပေးရန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများကလည်း ပေါ့ပေါ့သဘောမထားဘဲ ပညာရှင်များ၏
အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံစဉ်းစားကြဖို့ ပံ့ပိုးပေးလိုခြင်းဟူသည့် ရိုးရှင်းသောစေတနာ
( ကြုံ၍ပြောလိုသည်မှာ ကျနော့်အနေဖြင့် ဖဘတွင်ရေးသားကြတင်ကြသည်များကို
မည်သူမဆို သဘောကျ၍ ဝေမျှလိုက ဘာမှ ရှယ်မယ်နော်ဟု ခွင့်တောင်းစရာမလိုပါ။
တိုက်ရိုက် ခလုပ်နှိပ်ပြီး ရှယ်ကြပါ။ မည်သည့်စာမဆို ခေါင်းစဉ်မှသည် စလယ်ဆုံး
ဖတ်ပြီးမှ ဇာတ်ရည်လည်မည်မို့ copy & paste / cut လိုသလိုလုပ်ကာ version
ပြောင်းခြင်းကိုတော့ မူလပို့စ်ရှင်အားလုံး ကျေနပ်ကြမည်မဟုတ် ဆိုသည့်
Dagon City Project ကတော့အ ထပ်မြင့်မဟုတ်ဘဲ ငါးထပ်သာလို့သာ ကြားပါတယ်။ ဟုတ်လား မဟုတ်လားေတော့ သေချာမသိဘူး။
ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန်သဘောဖြင့် ဝေဖန်သူများကို အရေးယူမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်
ယခင်စစ်တပ်ပိုင်မြေပေါ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်း(၁)ကို ရပ်ဆိုင်းစေလိုသော သဘောဆန္ဒဖြင့် ပြောဆိုဝေဖန်သူများအား တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း Marga Land Mark ကုမ္ပဏီက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်းမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိသဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံထားရသည့် စီမံကိန်းငါးခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်းကြောင့် မြေအောက်ရေတွေထွက်ပြီ ရွှေတိဂုံပြိုမှာစိုးလို့ ဝေဖန်ပြောနေကြတယ်ပေါ့။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည်မြေအောက် က မထွက်သင့်တာတွေ ကုန်သလောက်နီးပါးထွက်သွားပြီး တိုင်းပြည်ကြီး နေရာအတော်များများမှာ ပြိုနေတာကြာလှပါပေါ့ကွယ်။ သူတို့အတွက်တော့ (သူတို့ဆိုတာ ယခင်ဘောင်းဘီဝတ်နဲ့ယခုဘောင်းဘီချွတ်အစိုးရ) ထူးမခြားပါဘဲလို့…………။
ပြောတဲ့သူတွေ မောရင် ရေ သာသောက်လို့ အမောဖြေအုံးနော်။
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးအကြောင်း ရေးနေကြတော့ ကျွန်တော် လဲ ရေးချင်လာရောဗျ
ဝိဇ္ဇာဇော်ဂျီ တန်ဆောင်း နားက တန်ဆောင်း တစ်ခုရဲ့ အဝင်ဝမှာ ကြာပွတ်ကိုင်ထားတဲ့ ကုလားရုပ်ထု ၂ ခု ရှိတယ်
ရွှေတိဂုံဘုရား တက်တိုင်း အမေ က အဲ့ စောင်းတန်းခေါ်ခေါ်သွားတယ်ဗျ
ကျွန်တော့် အဘေး တွေ က အိန္ဒိယ က သံထည်သွန်းလောင်းတဲ့ ပညာရှင်တွေကို ခေါ်ပြီး သူတို့လှူတဲ့ တန်ဆောင်း ရဲ့ အဝင်ဝ မှာ တန်ဆောင်းစောင့်တဲ့ လူ ၂ ယောက် ပုံ သွန်းလောင်းခိုင်းခဲ့တာတဲ့
ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယ က လာတဲ့ ကုလား က ကုလား ပုံ ဘဲ သွန်းလောင်းတတ်တော့ ကုလားရုပ်ထု ဖြစ်သွားတာလို့ အမေ က ပြောပြတယ်
တချို့လူတွေက ဂေါ်ရင်ဂျီ ပွတ်ချွန်း ကပ် ပြီး အဲ့ ရုပ်ထု တွေ ကို နှိပ်နယ် ပေးနေရင် ကျွန်တော်တို့ လဲ တိတ်တခိုး ရီကြတာပေါ့
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အာဏာရ တော့ ရှေးဟောင်း အရုပ်တွေအပါအဝင် အဲ့ အရုပ် ၂ ရုပ် ကို မြန်မာမှု မဖြစ်လို့ဆိုပြီး ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ပေါ်က ဖယ်ရှားလိုက်တယ်
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တို့ က ပုဂံဘုရား ဆေးရေးနံရံတွေ ကိုတင် ထုံးသုတ် တာမဟုတ်ဘူးဗျ ရွှေတိဂုံ ပေါ်က ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကိုလဲ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပါဘဲ
တန်ဖိုးမသိတဲ့ လူ တွေ လက်ထဲ အာဏာရောက်နေတော့ လယ်တီသိမ် နဲ့ တရုတ်သံချပ်ကာကား အလဲအထပ်လုပ်ခဲ့သလိုပါဘဲ ရွှေတိဂုံ ဘုရား နဲ့ အခုဆောက်မယ့် ကွန်ဒိုမီနီယံ အလဲအထပ် လုပ်ဖို့ ကို တွေဝေမယ်တော့ မထင်ပါဘူးဗျာ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိအစိုးရ နဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ပါတီတွေကို ဖြုတ်ချနိူင်မှသာ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး ကို ကယ်တင်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ အသိပေးပါရစေ…
မြန်​မာပြည်​ ရဲ့ပုံရိပ်​ တစ်​ခု ြဖြစ်တဲ့
​ရွွှှေတိဂုံ​စေတီ ကို နားလည်​သိတတ်​ တဲ့
ဘူမိပညာရှင်​ ​တွေနဲ့ တိုင်​ပင်​သင်​့တယ်​
ခက်​တာက ဒီကလူ​တွေက ဂန္ဘီရ ပညာကို
.ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦ ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ ဝင်ရင်ကောင်းမယ်နော်။ ဟိုဟာလေ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး တို့ ၊ ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်း တို့ပါတဲ့အဖွဲ့ကို ပြောတာ။
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၂)
Posted by asiamasters on Aug 21, 2011
၁၉၉ရ ခုနှစ်မှာ နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးရဲ့ ထပ်မံတာဝန်ပေးချက်အရ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ရ ပါတယ်။ အခုတော့ရုံးတွေကပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။ ယခင်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးဆိုတာက ယခု အထက-၁ ဒဂုံရှိတဲ့ အလံပြဘုရားလမ်း အတိုင်း ဆူးလေဘက်ကို မဆင်းပဲ အပေါ်တက်သွားလိုက်ရင် စစ်ရုံးတံခါးကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတံခါးကြီးကို အတွင်းကိုဆက်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်လေးမှာရှိတဲ့ဒုတိယမြောက် အုတ်နီ အဆောက်အဦ တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ အဆောက်အဦဟာ (၃) ထပ်ရှိပြီး P ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ P ရဲ့အတွင်းနေရာလေးမှာတင်းနစ်ကွင်းလေးရှိပါတယ်။ P ရဲ့ ခြေရင်းလေးမှာ ဘော်လုံးကွင်းအရွယ် မျက်ခင်းရှိပါတယ်။ ကိုလိုနီအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပြီး အုတ်နီနဲ့ တည်ဆောက်ထား တဲ့အတွက် ကြည့်ရတာရိုးရိုးလေးနဲ့ အလွန်လှပါတယ်။ ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီးတွေ အုပ်ဆိုင်းနေတော့ နေပူထဲကလာရင်တောင်အေးမြ သွားစေပါတယ်။ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးက ပထမထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရုံးခန်းဟာလည်း အဆောက်အဦရဲ့မြောက်ဘက် ပထမထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းတော့ အထိုင်မကျသေးတာနဲ့ ဘာမှမလေ့လာနိုင်ပါ။ ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကို ကျေပွန်အောင်၊ နားလည်နိုင်အောင် နေ့မအိပ် ညမအိပ် ကြိုးစားနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့နေခဲ့ပေမဲ့ တစ်ရက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာဆရာကြီးဦးစောထွန်းက စာအုပ်တစ်အုပ်ယူလာပါတယ်။ စာအုပ်က အတော်နွမ်းနေပါပြီ။ စာအုပ်အမည်ကိုဖတ်လိုက်တော့ ဂျပန်ခောတ်ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာစာ ကို ဖတ်လေ့ ဖတ်ထ သိပ်မရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက် အစက စိတ်မဝင်စားပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီးဦစောထွန်းက ဒီစာအုပ်က အခု ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရုံးအကြောင်းပါတယ်လို့ပြောတော့ နဲနဲစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ စဖတ်လိုက်တာနဲ့ လက်က မချ ချင်တော့ပါဘူး။
ဒီအဆောက်အဦဟာ အင်္ဂလိပ်ခောတ်မှာဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဒိုင်အိုဆီဇန် (Diocese) လို့ခေါ်တဲ့ ခရစ်ယာန် မိန်းကလေး ကျာင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးက ၁၉၃၉ ခုနှစ်လောက်မှာစဖြစ်တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ ဂျပန်တွေနဲ့ မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကိုတော့ ဂျပန်ခောတ် လို့ဆိုပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ၁၉၄ဝ ခန့်ကနေ ၁၉၄၅ လောက်ထိကိုဆိုလိုတယ်။ အဲဒီဂျပန်ခောတ်မှာ ဒီအဆောက်အဦကို ဆေးရုံ အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါက်တာမြင့်ဆွေရေးတဲ့ ဂျပန်ခောတ်ဆေးရုံကြီးဆိုတာက ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာဖြစ်နေမှန်းသိလာရပါတယ်။ ဒီနေ့ကနေစပြီး ကျွန်တော်ဟာ တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက် အကုန်လိုက်ရှာတော့တာပါပဲ။ တစ်ခါတရံ လူကြီးအခန်းတွေထဲမှားဝင်သွားလို့လဲ အဟောက်ခံခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်။
ဒီအဆောက်အဦဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ လုံးဝပတ်သက်နေတဲ့ လွမ်မောစရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ခောတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေခဲ့အိမ်ဟာ ယခု အထက – ၁ (ဒဂုံ) ရှေ့မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကြီး နေအိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အထက -၁ (ဒဂုံ)ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စစ်ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ်နဲ့ ဆေးရုံဟာ မနီးမဝေလေးမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်ဆေးရုံရဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဟာ ဒေါက်တာဘသန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဘသန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဆုံး အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ FRCS အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံနဲ့နီးသောလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အလုပ်အလွန်များတဲ့အတွက် တစ်ခါမှာ မလာဖူးပါဘူး။ သို့သော်တစ်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ် အပြင်းဖျားလေပြီ။ ဖျားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အလုပ်အရမ်းများတာရယ်၊ ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်တာရယ်ပါပါတယ်။ ဒီတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။ နောက်တစ်ပိုင်းမှာဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၃)
ဗိုလ်ချုပ်အတော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို ဖုန်းဆက်ပြီပေါ့။ နေမကောင်းတာက အမှန်ကတော့ ဝမ်းချုပ်တာပါ။ ဒီတော့ ဖျားလည်းဖျားတော့တာပေါ့။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဘသန်းဟာ ဒီသတင်းကိုရတာနဲ့ သူနာပြုဆရာမတစ်ဦးကို ဗိုလ်ချုပ်ကိုပြုစုဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး၊ သူနာပြုဆရာမလေးဟာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုပြီးပြန်လာပါတယ်။ သူ့အပြောကတော့ ဗိုလ်ချုပ်က ဆဲလွှတ်လိုက်တယ်ပြောပါတယ်။ နောက်ဘယ်လိုချော့မော့ လွှတ်လွှတ် မသွားတော့ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါက်တာဘသန်းဟာ သူနာပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ရွေးချယ်ပြီးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသလားမပြေသလားတော့မသိဘူး၊ တော်တော်နဲ့ကို ပြန်မလွှတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ နေ့စဉ်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည်မသွားတဲ့နေ့ဆိုရင်တောင် တယ်လီဖုန်း ဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါတယ်။ နေကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ ယခင်က မှုံကုတ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျက်နှာဟာရွင်လန်းအသက်ဝင်လာပါတယ်။ တစ်ခါမှ မလာဖူးတဲ့ ဆေးရုံကြီးဘက်ကို လမ်းလျှောက်လို့ လာပါတော့တယ်။
ဒီဆေးရုံကြီးမှာက ဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်ခင်ရီညီအစ်မနှစ်ဦးစလုံးသူနာပြုအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖက်ကဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ခါစမှာတော့ ဗဟန်းမှာ အခန်းငှားပြီးနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆေးရုံကြီးမှာပဲ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးနေတဲ့အခန်း က အဆောက်အဦရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်အရပ် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဒီအခန်းကို အတော်ရှာရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီအခန်းရဲ့ အရှေ့နားမှာ ကော်ရစ်ဒါအကျယ်ကြီးရှိပါတယ်။ ဒီကော်ရစ်ဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ် ရည်းစားရှာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ညနေမှောင်ရီဝိုးတဝါးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဒီကော်ရစ်ဒါကိုလာပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဘသန်းဟာ အဆိုအတီးကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီကော်ရစ်ဒါမှာထိုင်ကြပြီး စိန်ခြူးကြာညောင်သီချင်းကို သီဆိုကြပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းအုပ်ဆိုင်းနေ၊ တေးဂီတကလည်းမြိုင် ချစ်ရသူကလည်းနံဘေးနားမှာထိုင်နေဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး အချိန်လေးလို့တောင်ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၄)
အခြေအနေက အတော်ကြီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်လာပါတယ်။ ဆရာမကိုပဲ ချစ်မိပြီ သီချင်းကလဲ ပိုမြိုင်ဆိုင် လာပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အခြေအနေထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တာကလည်း ဒီဆေးရုံကြီးရဲ့ ဆင်ဝင်နှစ်ခုကြား မြေညီထပ်မှာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ပြခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလဲဖြစ်ပြန်တော့ ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အတော်များများတက်ရောက်ပါတယ်။ ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကားတွေဟာ အလံပြဘုရားလမ်း အတိုင်း အပေါ်က အောက်ကို ဆင်းလာပြီး လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် အလွန်ခန်းနားကြီးကြယ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီအခန်းကို သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့စဉ်က အတော်ရှာရမယ်ထင်ထားတာ၊ တကယ်တော့ ကျွန်တော့နေ့တိုင်း ထမင်းစား ဆင်းရင် ဖြတ်သွားနေတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမှာ ဒေါက်တာဘသန်းရဲ့ သမီးလေး ကစ်တီ (နောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနှင့်အကြောင်းပါသည့် ဒေါ်ခင်မေသန်း) က စန္ဒယားတီးပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ထောင်ကျပြီးချိန်မှာတော့ တာဝါလိန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ ယခုဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကိုပြောင်းနေပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီအိမ်ကိုသွားတာပါပဲ။ အိမ်က ကိုလိုနီအိမ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်စင်လေးပါတယ်။ ခြံထဲစဝင်တာနဲ့ ညာဖက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်စီးခဲ့တားကားရပ်ထားတဲ့ ကားဂိုဒေါင်ရှိပါတယ်။ အိမ်အထိကိုတော့ အပေါ်ထိတက်သွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားတုန်းကတော့ အပေါ်က ဘုရားထားတဲ့ အခန်းလေးထိတက်လို့ရသေးတယ်။ နောက်တော့ အဆောက်အဦမကောင်းတော့လို့ မတက်ခိုင်းတော့ဘူးလဲကြားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အင်္ကျီအဝတ်အစားအချို့ရှိတယ်။ သူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ အိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သားလေးရေနစ်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဗုဒံသရဏံအပင်လေးတွေနဲ့ ရေစပ်စပ်လေးရှိသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရပြီးအချိန်မှာ အလောင်းတွေကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရေခဲတိုက်ကိုသယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ဒေါက်တာဘသန်းကပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်အပိုင်းများဆက်ရေးပါဦးမည်။
မဟာကြောင် ဝေါ ပေါ်ကတွေ့လို့
ရွေတိဂုံစေတီကြီး နဲ့ ဒဂုံစီးတီး ဆောက်လုပ်ရေး ကိစ္စတွေကို ကြောင်လဲ လက်လှမ်း မိသလောက် တီးမိခေါက်မိပါတယ်။
လိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ ဘန်ကောက်က Geologist တစ်ယောက်ကလည်း သူတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေ စုဆောင်းပြီး ဒဂုံစီးတီး ဆောက်ရင် ရွေတိဂုံ စေတီကြီးအပေါ် သက်ရောက်လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရေးနေတာ တွေ့ရတယ်။ တကယ့်ကို ပညာရပါတယ်။ ကြောင့် အနေနဲ့ အဲဒီလောက် မသိပေမဲ့၊ ဒီစီမံကိန်းကြီး နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ YCDC ဆိုတဲ့ မြို့တော်စည်ပင်၊ MES လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု တွေ နောက်ကွယ်က ဘယ်သူတွေ ပါသလဲ ဆိုတာကို လိုက်ကြည့်မိပါတယ်။
အဲဒီလို လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ သိလိုက်တာကတော့
(၁) ဒီပရောက်ဂျက် စတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ Project Proposal လုပ်ပြီး တင်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လို နယ်မြေသတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘယ်လို လိုအပ်ချက်တွေ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ Building Code နဲ့ Zoning Code မထွက်သေးဘူးလို့ သိရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ ပရောဂျက်ကို ချပေးလိုက်တာလို့ သိရတယ်။ တကယ်တမ်း အဲဒီ ကုဒ်တွေ ထွက်လာတဲ့ အခါမှာ အခု ပရောဂျက် က အကုန်ငြိစွန်းနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကုုမ္ပဏီက လက်ရှိ project နေရာဟာ သိ်ဂုုင်္တ္တရကုုန်းနဲ့ တဆက်တည်း မဟုုတ်ပါဘူး လိုု့ ငြင်းတယ်။ ကုုန်းတော်ပတ်ဝန်းကျင် မွန်ဘုုန်းကြီးကျောင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်က မြေတူးပြီးဦးထောင်ဘိုုလမ်းကိုု မဖောက်ခင်က လက်ရှိ project နေရာဟာ သိ်ဂုုင်္တ္တရကုုန်းနဲ့ တဆက်ထဲပါလိုု့ ဓါတ်ပုုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့ ပြန်ငြင်းလိုု့ လက်ရှိ project နေရာဟာ သိ်ဂုုင်္တ္တရ zone ထဲ ပါသွားတာ ဖြစ်တယ်လိုု့ သိထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ သိတဲ့ အတိုင်း ကြောင်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ပြသနာ တခုဖြစ်လာရင် ဖြစ်လာတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ထက် အဲဒါကို ဖုံးဖိလိုက်ဖို့ပဲ လုပ်နေကြတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူမျက်နာကို ဘယ်တုန်းကမှ ကြည့်လဲ မကြည့်ခဲ့ကြဘုးလေ။ စေတနာတွေ အားနည်းကြတယ်ပေါ့။
(၂) အဲဒီ ပရောဂျက်မှာ ဂျပန်က ဆောက်လုပ်ရေး ကုုမ္ပဏီပါတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ်။ ခုနက ကုတ်တွေ ထွက်လာတော့ ဂျပန်ကုုမ္ပဏီက Project Plan တွေရယ် Zoning code နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြန်ပြင်တယ်။ ဂျပန် အာခီတက်တွေကော ပညာရှင်တွေပါ ပါဝင်ပြီး လုပ်တယ်လို့ ကြားရပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး ပြန်ကြားတာကတော့ ဂျပန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အဖွဲ့က ဒဂုံစီးတီးမှာ ထွက်သွားပြီလို့ သိလိုက်ရတယ်။ လက်ရှောင်သွားတယ်ပေါ့။ ဂျပန်အနေနဲ့လဲ ရေရှည်လုပ်ရမှာမိုလို့ ပြည်သူနဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူးထင်ပါရဲ့၊ အခုလက်ရှိတော့ မြန်မာ Stubborn တွေပဲ ကျန်တော့တယ်။
(၃) နဂို မူလ ပရောဂျက်က ၁ဝ ထပ် ဆောက်မလိုပဲ၊ ရွေတိဂုံနဲ့ Zoning code နဲ့ Building Code အရ မြေပေါ်ကို ၄ ထပ်ပဲ ဆောက်လို့ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ လောဘသားတွေကြောင့် အခန်းတွေလဲ ရောင်းပြီးနေပြီ၊ မြေငှားခတွေလဲ ယူပြီးပြီလို့ သိလိုက်ရတယ်။ မဖြစ်မနေ ၁ဝ ထပ် ဆောက်ရတော့မယ်။ အဲဒီမှာ မြေအောက်ကို ၆ ထပ် အထိ ဆက်ဆင်းမယ်ဆိုလာကြတယ်။ အရင်တုန်းက ၂ ထပ်ပဲ ဆင်းမလို့ ကြံရွယ်တာကနေ အခုတော့ ၆ထပ်အထိ ဆင်းမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားတာ ကြည့်ပေတော့။ ဒီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လူတွေကလည်း အပေါ်ပိုင်းက ထိပ်ဆုံးနားအထိ လူတွေ ပါတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပရောဂျက်ကို ပျက်အောင် လုပ်တဲ့သူ အရေးယူမယ်ဘာမယ်နဲ့ သိတဲ့ အတိုင်း ပါးစပ်ထဲ ရှိတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ဖို့ ပြင်လာကြတာပေါ့။ ဗိုလ်မြင့်ဆွေက အကောင်းအထဲ ဖော်မယ်ထင်ပါရဲ့။ လက်တွေလဲ လွန်နေပြီ ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ပြီး မဲမဲ မြင်ရာ ရမ်းရတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာတာပဲ၊
(၄) ဒါနဲ့ MES ရဲ့ ပါဝင်မှုကို လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ MES က သူတို့အနေနဲ့ Expert Opinion လောက်ပဲ ပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ထဲထဲ ဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု မလုပ်ခဲ့ဘူး။ အဆောက်အဦး ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက ဘာလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ၆ ထပ် အထိ မြေကြီးထဲ ဆင်းရမှာ ဆိုတော့ MES လဲ သူတို့ အကြံမပေးနိုင် Geologist တွေ ဆီက ပြန်တောင်းပါဆိုပြီး သူလဲ ခေါင်းရှောင်လိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်။
(၅) Geologist တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို လိုက်ကြည့်တော့ ရွှေတိဂုုံအောက်မှာ ရှိတဲ့ မြေလွှာ၊ ကျောက်လွှာတွေက အခုု ဆောက်မဲ့ဘက်ကိုု စောင်းနေတယ်။ မြေကုို ဒီအတုိုင်း ၆ထပ်ဆောက်ဖိုု့ တူးရင် တူးတဲ့ဘက်ကုို လေ ျှာကျ (ပြို)လာနုိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှီတယ်။ ထမ်းထားတဲ့ weight ကိုု သေချာ တွက်ပြီး မပြိုအောင် ထိန်းနုိုင်မဲ့ piling wall လုုပ်ရမယ်။ အခုုအထိတော့ ကုုမ်ပဏီဘက်က geologist တွေ ကျေနပ်လော်ကတဲ့ solution နဲ့ ပြန်မလာသေးဘူးလိုု့ သိထားတယ်။
နောက်ဆုံး ကြောင့်ရဲ့ သဘောထားကို ပြောပြရရင်တော့ မြို့ပြတခုကို ထူထောင်တယ်ဆိုတာ အထပ် အမြင့်ကြီးတွေ မိုးပျံတိုက်ကြီးတွေ ရှောပင်စင်တာကြီးတွေ ဟိုနေရာ တစ ဒီနေရာ တစ ပေါ်လာတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း အတိုင်းအတာ တခုအထိ မြိုပြ အခြေအနေအလိုက် Green Area ဆိုတာလည်း လိုအပ်တယ်။ သစ်ပင် သစ်တော့ စိမ်းလန်းနေတဲ့ မြိုပြ တွေ၊ ပြည်သူတွေ အပန်းဖြေ နားနေဖို့ မြို့လည်ကောင်ပေမဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ မြေကွက်လပ်တွေ ၊ ရေကန် အလှအပတွေ Reserve တွေ အားကစားကွင်း ဘောလုံးကွင်း အတွက် ကွက်လပ်တွေ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်တဲ့ ရွေတိဂုံတို့လို ဝန်ကြီးများရုံးတို့လို အဖိုးတန် အဆောက်အဦးတွေ ဆိုတာ ထိမ်းသိမ်းရမှာပါပဲ။ ရန်ကုန် မြို့ကြီး အကျယ်ကြီးပါ။ တခြား ဆောက်လုပ်ရတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီမှာ သွားပြီး မိုးပျံတွေ ဆောက်ပေါ့။ မြေနေရာ လိုအပ်ရင် မြေနေရာမှာ ရှိတဲ့ သူတွေကို ကာလ ပေါက်ဈေးပေးဝယ်ပြီး ဆောက်ပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံခြားမှာ ဆိုလဲ လိုက်ကြည့်ပေါ့။ ဝါရှင်တန် ဒီစီက ကျောက်တိုင်ကြီးတွေ ဗာတီကန် နန်းတော်တွေ အင်္ဂလန်က စိန်ပေါ ဘုရားကျောင်းတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လို အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်ခွင့် မပေးလဲ လိုက်လေ့လာရမှာပေါ့ဗျာ။ Heritage ဆိုုတဲ့ စကားလုံးက အလကား ဖြစ်လာတာမှ မဟုတ်တာ၊
တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာလေး ထားကြပေါ့ဗျာ။ ငါပိုက်ဆံရမှာပဲ ငါ့ဆွေးမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း အဆင်ပြေမှာပဲ ဆိုတာထက် တိုင်းပြည်ဆိုတာလေးကို တချက်လောက်ပဲ ငဲ့ကြည့်စေချင်တယ်။ နောက်ပြီး အခုနေရာက တပ်ပိုင်နယ်မြေမိုလို့ ငါပိုင်တဲ့မြေ ငါဟာ ငါ လုပ်တယ်။ သောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အထာတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလောက် သောက်ဂရုမစိုက် ဖြစ်နေရင်လဲ တတိုင်းပြည်လုံး အကုန်သတ်ပြီး အဲဒီ ငါ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲ နေလိုက်ကြတော့ဗျာ။ စိတ်လဲ ကုန်လာသလို စိတ်လဲ နာလာပြီ။ နောက်ဆုံး တခုပဲ ဆိုချင်တာကတော့ စေတနာပေါ့ဗျာ။ စေတနာဆိုတာလေး တခုပဲ။ အဲဒီ စေတနာ က ကံဖြစ်လာနိုင်တာပါဆိုတာပါပဲ၊
အဲလိုပရောဂျက်ကို စိစစ်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့… ထင်တယ်..။
ဒီမှာက.. ပရောဂျက်အကြီးတွေဆို.. အဲဒီရပ်ကွက်ကအိုကေရတယ်လေ..။
ရပ်ကွက်က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလည်း.. ပြန်တောင်းတာပေါ့..
လမ်းဖေါက်..တံတားဆောက်..။ ဒီဗဲလုပ်ပါကိုကြိုက်တာခိုင်း… ငွေနိုင်တဲ့အထဲက…အကုန်လုပ်ပေးပဲ..။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရတဲ့အမြတ်ငွေတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအချို့ရင်းနှီးပြီး.. ရွှေတိဂုံစေတီကို ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်သင့်တာပါ..။
နှစ်ရာချီနေတဲ့ ရှေးဟောင်းစေတီတော်ကို.. ဒီအတိုင်းပစ်ထားရင်..
ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်လိုက်..အင်္ဂတေလေး..ဟိုနားဒီနားမံလိုက်နဲ့တင်လုပ်နေရင်.. နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်.. တာဝန်မကျေရာကျတာမို့…
ဒေါ်လာ ၁ဝသန်းလောက်ရင်းပြီး.. စေတီကြီးကို.. စတီးဖရိမ်တွေထည့်.. ပိုင်တွေရိုက်ထည့်..ဘူမိစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်… ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ကွန်ခရစ်တွေမှုတ်ထည့်အားဖြည့်.. နောင်အနှစ်၅၀၀+ ခိုင်ခန့်တည်တန့်အောင်အာမခံရအောင်… လုပ်သင့်…
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို …(တကယ်)..တကယ်ကယ်တင်ပါ.. လို့ပဲ..။
လူပြိန်း လိုဘဲ ကြည့်ပြီး ပြောပါ့မယ်။
ဒီလောက် မြို့ကြီး ကို လှပခေတ်မှီဖို့ မြို့လည်က ရှိပြီး အိမ် အို အိမ်ဟောင်း တွေ ကို ပိုင်ရှင် တွေ နဲ့ ညှိပြီး ပြင်ပေးပါတော့လား။
. မြို့ထဲ မှာ လူနေတဲ့ နေရာ အများ က ညစ်ပတ် ပေတူး ပြီး ရုပ်ပြမလှ တာ တွေ က အသစ် ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အကျည်းတန် စေမှာဘဲ။
တကယ် တော့ လောလောဆယ် ဒီ အသုံးမကျ တဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း အစိုးရ လုပ်နေ တဲ့ ပရော့ဂျက်တိုင်း က တိုင်းပြည် ကို တိုးတက်ဖို့ ထက် သူတို့ အိတ်ထဲ ဝင်နိုင်ဖို့ အချိုး တွေ ဘဲ။
စကာင်္ပူ က ကျွန်းနိုင်ငံ ပေါက်စ မို့ တိုက် တွေ မိုးထိုး အောင် ဆောက်ရတာ။
တကယ်တော့ ရန်ကုန် က အမြင့် တွေ ဆောက်စရာ မလိုဘဲ ဘေး ကို ချဲ့ လို့ ရသေး တယ်။
အမေရိကား ကိုတော့ မရောက်ဘူးတော့ မသိ၊ ဥရောပ မှာတော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အိမ်တွေ ဆိုတာ နိမ့်နိမ့် ဘဲ။
ကျွန်မ နေတဲ့ နေတာ ဆို မြင့် တဲ့ တိုက် တွေ ဆိုတာ ဆင်းရဲသားတွေ နေဖို့ နဲနဲ ဘဲ ဆောက်ထားပေး တယ်။
ဈေးမြင့် တဲ့ အိမ်ခန်း တွေ ဆိုတာ နိမ့်နိမ့် ဘဲ။
နှစ်ထပ်အိမ် တွေ ဘဲ များတယ်။
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း ဘေးမှာ သစ်ပင် တွေ ရှိတယ်။
နေရာတိုင်း က စိမ်း နေတယ်။ အသက်ရှူလို့ ဝ တယ်။
. မြန်မာပြည် က ပိုက်ဆံ ရရင် ပြီး ရော စိတ် နဲ့ ကိုယ့် အတွက်ချည်း ဘဲ လုပ်နေတော့ အများ အတွက် ရေရှည်ကောင်းဖို့အတွက် ကို မစဉ်းစား တော့ဘူး။
ငါနေရာ ရတုန်းလေး ငါ့ အတွက် ဆိုတဲ့ “ကိုယ့်ကို ကိုယ် အတင်း ကယ် ” နေကြ တဲ့ လူ တွေကြား
. မြို့ပြ က ရုပ်ဆိုးပြီး ရင်း ဆိုးရင်း၊ တိုင်းပြည်က နစ်ပြီးရင်း နစ်ရင်း ၊ လူ တွေ က ငတ်ပြီး ရင်း ငတ်ရင်း ၊ စိတ်ဓာတ်တွေ က နိမ့်ပြီးရင်း နိမ့်ရင်း …………….